xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: June 2011
ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစု တစ်နှစ်ဒေါ်လာသန်း ၃၂၀ ကျော်သုံး
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:19 PM
ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတရုတ်လူငယ်များအား တရုတ်ပြန်ပို့ မန်းကျောက်ဝိုင်း ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်မျက် ရတနာဈေးတွင် ဇွန် ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျောက်ကုန် သည်များ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျောက်ဝိုင်းအား ယာယီပိတ် လိုက်သော်လည်း ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါရန်ပွဲမှာ တရုတ်ကျောက် ကုန်သည်ငါးဦးမှ မြန်မာကျောက်ပွဲစားတစ်ဦးအား ကျောက် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍မကျေနပ်ရာမှ ဝိုင်းဝန်းထိုး ကြိတ်ကြရာမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ် ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများက ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေရာမှတစ်ဆင့် ရန်ပွဲမှာ ကြီးထွားလာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် မဟာအောင်မြေရဲစခန်းနှင့် အမှတ် ၇ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီး လူစုခွဲခဲ့သည့်အတွက် ရန်ပွဲမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါရန်ပွဲကြောင့် မြန်မာကျောက်ပွဲစားဖြစ်သူ အသက် ၄ဝ နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိ ကိုမော် ဆို သူမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ပြင်ပလူနာအဖြစ် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာကျောက်ပွဲစား အား ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ခဲ့သော တရုတ်ကုန်သည်ငါးဦးကိုမူ တရုတ်သံရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ကာ အဆိုပါနေ့ညနေပိုင်း၌ တံတားဦးလေဆိပ်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သက်ဆိုင်ရာမှပြန်လည် ထွက်ခွာသွားစေခဲ့ကြောင်း မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းရှိ ကျောက်ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
”စဖြစ်တာက ကျောက်ဖြတ်ဝိုင်းမှာ ကိုမော် ဆိုတဲ့ပွဲ စားက တရုတ်ကုန်သည်တွေကို မနက် ၈ နာရီခွဲလောက်မှာ ဖြတ်စတစ်ခု လာပြပြီးဈေးစကားပြောတယ်။ တရုတ်တွေက အဲဒီကျောက်ကို ၄၂ သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ပထမတော့ ဈေးအဆင်ပြေပြီးကျောက်ကို ချိပ်စည်းပြီးပြီ။ ဒီအချိန်မှာပဲ တခြားကုန်သည်တစ်ယောက်က ၄၅ သိန်းပေးမယ် ပြောတော့ ကိုမော် က စောစော တုန်းက သူ့ကို ၄၂ သိန်း ပေးတဲ့ကုန်သည်ကို ဈေးထပ်တိုးပေးမလားမေးတယ်။ သူတို့က ဒီဈေးပဲပေးနိုင်မယ်ပြောလို့ ချိပ်စည်းထားတာကို နှစ်ဦးသဘောတူ ပြန်ဖျက် လိုက်တယ်။ ဒီနောက် ကို—က ၄၅ သိန်းပေးတဲ့ ကုန်သည်နဲ့ အရောင်းအဝယ်သွားလုပ်နေတုန်း ၄၂ သိန်းပေးတဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေက ကို— ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး သူတို့ဆိုင်ထဲလည်း ရောက်ရောဝိုင်းထိုးကြတာပဲ။ ဒါကိုမြင်တဲ့သူတွေက ဝိုင်းဆွဲတော့ ဆွဲတဲ့သူတွေကိုပါ လိုက်ထိုးတယ်။ အရင်တုန်းက တရုတ်ကုန်သည်နဲ့ မြန်မာကုန် သည်တွေ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ မှားမှားမှန်မှန် မြန်မာတွေပဲအရေးယူခံရမှာဆိုတော့ ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲဘူး။ နောက်တော့ ရဲတွေရောက်လာပြီး ရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေကို အမှတ် ၇ ရဲစခန်းကိုခေါ်သွား သလို ကျောက်ဝိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအရ ခဏပိတ်လိုက်တယ်။
ဒီကနေ့ မြန်မာ့အသံ ညနေ ခြောက်နာရီ သတင်းမှာ အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန် သွားပါတယ်။ အဲဒီ ကြေညာချက်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ အစိုးရ ၀န်ထမ်းများရဲ့ ပင်စင်လစာကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ လစာနှုန်းထား အသစ်များအရ ခံစားနေရတဲ့ ပင်စင် ခံစားခွင့်အတိုင်း ဇူလိုင်လ ပင်စင် လစာကနေစပြီး ခံစား ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွေမှာ လက်ရှိ ၀န်ထမ်းများရဲ့ လစာကို အဆများစွာ တိုးပေးခဲ့ပေမယ့် ဟိုတုံးက လစာ နှုန်းထားဟောင်းများနဲ့ အငြိမ်းစား ယူခဲ့ကြတဲ့ ပင်စင်စားများရဲ့ အငြိမ်းစား လစာများကို တိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အချို့ ပင်စင်စားများရဲ့ လစာဟာ အခုခေတ် ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ ဆိုရင် ထမင်း တစ်ပွဲစာတောင် မရှိတဲ့ဘ၀ ရောက်နေတဲ့ အတွက် ပင်စင်လစာတွေ တိုးပေးရေးဟာ ပင်စင်စားကြီးများရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ၏သတိပေးချက်ကို NLD က စာတစ်စောင်ပေးပို့၍ မေတ္တာရပ်ခံ
ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဦးအောင်ရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ သတိပေးတဲ့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါသည် ။
အဆိုပါသတိပေးချက်နှင့် ပတ်သက်၍ NLD က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးထံသို့ လိပ်မူ၍ စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကာ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ။အဆိုပါစာကို ဒေါ်စုကြည်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည် ။
အဆိုပါစာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အလေးထား ပါကြောင်း တူညီသောလိုလားချက်များအပေါ် ညှိနှိုင်းဆွေးလိုပါသဖြင့် စီစဉ်ပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ထားကြောင်း သိရပါသည် ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှထုတ်ပြန်သောစာအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 7:35 AM
ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဦးအောင်ရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ သတိပေးတဲ့ အကြောင်းကြားစာ ပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သတင်း ဖော်ပြချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား ဥပဒေနှင့် အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် အညီ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် မှတ်ပုံတင် တည်ထောင် ခွင့်ပြုသော ပါတီတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါအချိန်က တည်ရှိခဲ့သော နိုင်ငံရေး ပါတီများကို နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် ဆက်လက် တည်ထောင်လိုပါက ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် မတ် ၈ ရက် က ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ (နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဥပဒေ အမှတ် ၂/၂ဝ၁ဝ) ပုဒ်မ ၂၅ အရ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၉ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက် (၁၈/၂ဝ၁ဝ)ဖြင့် ရက်ပေါင်း (၆ဝ)အတွင်း ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားကြရန် ကြေညာ ခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့သော် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် ဆက်လက် တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားခြင်းနှင့် မှတ်ပံတင် ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်းများ မပြုလုပ်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်မှ ဥပဒေအရ ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍လည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်၏ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် အမှတ် (၉၇/၂၀၁၀) ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့် ပြုခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်၍ ပါတီဖျက်သိမ်းခြင်း ကြေညာချက်တွင် အခြားပါတီ(၄)ခု နှင့်အတူ ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။
အဆိုပါ ပါတီ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်တွင် နိုင်ငံတော် အပေါ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (က)၊ (ဇ)၊ (ည) နှင့် ၁၈၇၇ ခုနှစ် သီးခြား သက်သာခွင့် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၅ နှင့် ၅၅ အရ ပါတီ ဖျက်သိမ်းခြင်းမှာ တရား မဝင်ကြောင်း တရာရုံးချုပ် (ရန်ကုန်) သို့ လျှောက်ထား ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုလျှောက်ထားချက်ကို တရားရုံးချုပ် (နေပြည်တော်)က ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပလပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:02 PM
သရုပ်ဆောင် Michelle Yeoh ပြည်ဝင်ခွင့် မရသဖြင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ လှည့်ပြန်
ကမ္ဘာကျော် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်များနှင့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ရုပ်ရှင်များတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မကြာမီရုံတင်တော့မည့် ဒေါ်စုကြည်အကြောင်းရိုက်ကူးထားသည့် THE LADY ဇာတ်ကားတွင် ဒေါ်စုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ နာမည်ကျော် အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Michelle Yeoh သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က လာရောက်ခဲ့သော်လည်း ပြည်ဝင်ခွင့်မရသဖြင့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တစ်နာရီကြာ အချိန်ဖြုန်းပြီး လှည့်ပြန်သွားရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
The Lady ဇာတ်ကား၏ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်လည်သည့် Michelle Yeoh သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ တစ်ဆင့် ရန်ကုန် မြို့သို့ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း TG-305 ဖြင့် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် တစ်နာရီမျှသာ နေခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရှိ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ပြောကြားချက်ကိုကိုးကား၍ AP သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:55 AM
မန္တလေးမြို့ကျောက်ဝိုင်းတွင် မြန်မာနှင့် တရုတ်လူငယ် အချို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်မျက် အရောင်းအဝယ် ဈေးကွက်အတွင်း မြန်မာနှင့် တရုတ်လူငယ်အချို့အချင်းများရာမှ ရန်ပွဲဖြစ်လာ သောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်မီ ထိန်းသိမ်း ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ အဆိုပါကျောက်ဝိုင်းအတွင်းရှိ တရုတ်လူမျိုးပိုင် Path Travels & Tour မှ ဆိုင်ရှင် တရုတ်လူငယ်အချို့နှင့် မြန်မာလူမျိုးကျောက်ရောင်းသူ လူငယ်အချို့ ကျောက်အရောင်းအ ၀ယ်ပြုလုပ်ကြရမှ စကားများပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ အနီးနားရှိလူများ ၀ိုင်းလာပြီး လူစုလူဝေးဖြစ်လာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရကြောင်း သိရပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:21 AM
မြန်မာဘရူဝါရီ လီမိတက်၊ ကရုဏာရှေးရှုမြန်မာမှု အစီအစဉ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၈ ကြိမ်မြောက် သွေးလှူပွဲကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားသွေးဌာန၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည် ။
အဆိုပါမြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက်သည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော် မြန်မာဘီယာကို ထုတ်လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည် ။
မြန်မာဘရူဝါရီ လီမိတက်ရဲ့ ကရုဏာရှေးရှုမြန်မာမှု အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာ သွေးလှူဒါန်းပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့တာ စုစုပေါင်းသွေးပုလင်း ၃၆ဝဝ ကျော် လှူဒါန်းပြီး ဖြစ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ် ။
အမျိုးသားသွေးဌာနမှအမည်မဖေါ်လိုသူ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက " သွေးလှူရှင်များရဲ့ မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့ သွေးနဲ့လူနာများရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် ဘာလို့ဒီလိုပြောရသလဲ ဆိုတော့ ခုပဲဒီမှာကြည့် သွေးလှူမဲ့သူ ၄၀၀ ကျော်ရှိတယ် သူ့ဟာသူအစီစဉ်တကျအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ တစ်ချို့က ၁၄ ယောက် ၁၅ ယောက်လောက်နဲ့ ဓါတ်ပုံလာရိုက်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်စား တာမျိုးတွေရှိနေတော့ တခါတစ်လေ အင်မတန်စိတ်ညစ်ရတယ် အဲဒါမျိုးကိုကြတော့ သိပ်ပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး.. "
ရုရှားက မြန်မာတွင် ဘူမိရူပဗေဒ၀န်ဆောင်မှု စင်တာဖွင့်
ရုရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်ဘူမိရူပဗေဒဆိုင် ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Dalmorneftegeophysica (DMNG) က ၎င်း၏ငါးခု မြောက်ရုံးခွဲအားရန်ကုန်မြို့တွင် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အမှတ် ၁၂၇ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် အဆိုပါရုံးခွဲသည် ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများ၏ ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ ရှာဖွေ တွက်ချက်ပေးနိုင်မည့် စင်တာ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၎င်းစင်တာမှာ DMNG ၏ရုံးခွဲများ အနက် ရုရှားနိုင်ငံ Yuzhno-Sakhalinsk မြို့ရှိစင်တာပြီးလျှင် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွက်ချက် ပေးနိုင်သည့် ဒုတိယမြောက်စင်တာ ဖြစ်သည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်း၊ သတ္ထုရှာဖွေခြင်းအတွက် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာ တိုင်းတာခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချက်အလက်ရယူခြင်း၊ အချက်အလက်များ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ပုံဖော်ခြင်းဆိုသည့် အဆင့် သုံးခု တို့တွင် အချက်အလက်များတွက်ချက်ခြင်း အဆင့်ကို DMNG အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
မန္တလေး ၊ နေပြည်တော် ၊ ပြင်ဦးလွင် မြို့များတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား
မန္တလေး ဈေးချိုအနီးမှပေါက်ကွဲမှု ( ဓါတ်ပုံ The Voice Weekly )
မန္တလေးဈေးချိုတော်ရှေ့တွင် ဇွန် ၂၄ ရက်၊ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ခန့်က ရပ်ထားသော ကားတစ်စီးပေါ်၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဈေးချိုတော် ၈၄ လမ်း ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား မန်းမြန်မာ ပလာဇာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဈေးချိုဟိုတယ် မြေညီထပ်ရှေ့တွင် ရပ်ထားသော ကားတစ်စီးပေါ်၌ ယနေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့် အချိန်တွင် ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့များထံမှ သိရှိရသည်။ လောလောဆယ်တွင်မူ အဆိုပါ ကားအနီး ကုန်ပစ္စည်း သယ်ပို့လုပ်သားတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်းနှင့် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဈေးချိုပလာဇာ အပေါ်ထပ်မှ မှန်အချို့ ကွဲကာ ပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါကား၏ ယာဉ်အမှတ်မှာ ၃ခ/ ၁၉၀၄ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုမူ သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းအရ မန္တလေးတွင် မွန်းလွဲ ၃နာရီခန်.က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး ၈၄လမ်း ၃၁၊ ၃၂ ကြား ပရိယတ္တိသာသနအသင်း အနီးတွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
မန္တလေး ဒေသခံတစ်ဦးက " ဈေးချိုဘက်မှာ ၁၂ နာရီလောက်ကကွဲတယ် ဒီတော့သက်ဆိုင်ရာက ၈၄ လမ်းကို ၂၆ ကနေ ၂၈ ထိ ပိတ်ပြီး စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတုန်း ထပ်ကွဲတာ ..စိန်စံပယ်ဖူး ရွှေဆိုင် နားလောက်မှာ "ဟု ပြောကြားသွားပါသည် ။
မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော် သပြေကုန်းဈေးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် ဒေသခံများက ဆက်သွယ်ပြောကြားကြောင်း ၊ နေပြည်တော် သပြေကုန်းဈေး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံ တစ်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဗုံးပေါက်ကွဲသည်မှာ မှန်ကန်ပြီး ပိတ်ထားသည့် ဈေးဆိုင်ခန်းမှ ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ခန်းအမိုး ပွင့်ထွက်သွားကြောင်းပြည်တွင်းထုတ် The Voice Weekly ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ဖေါ်ပြသည် ။
ကန်ဥပဒေပြုအမတ် အညှီအဟောက်ဓာတ်ပုံများ အမျိုးသမီးများထံ အွန်လိုင်းမှပေးပို့ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံ
နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူရန် ရှေ့ဆုံးမှ အလားအလာရှိနေသည့် အမေရိကန်ဥပဒေပြုအမတ်တစ်ဦးသည် အားပေးသူ အမျိုးသမီးငယ်များရှိရာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် သူ၏အညှီအဟောက်မကင်းသောရုပ်ပုံ များကိုပို့ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သော်လည်း သူ့အနေဖြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားမည်မဟုတ် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဥပဒေပြုအမတ်၏ အမည်မှာ အန်သိုနီဝိုင်နာဖြစ်ပြီး အသက်(၄၆) နှစ် အရွယ်ရှိသူဖြစ်သည်။
မစ္စတာဝိုင်နာက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပ ကာ သူ့အနေဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အနည်း ဆုံး အမျိုးသမီးခြောက်ဦးနှင့်အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံသည်။ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင် သူသည် မျက်ရည်လည်ရွဲနှင့် စကား အထစ်အထစ်ဖြစ်ကာ သူသည်သူ၏ဘ၀ မှန်ကို လိမ်လည်၍ လိင်မှုရေးရာဆွဲဆောင် မှုပြုသော သူ့ကိုယ်တိုင်၏ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ကို အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးထံ Twitter မှနေ ၍ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ကွန်ဆာဗေးတစ်ဘလော့ဂ်ဂါ တစ်ဦးဖြစ်သူ မစ္စတာ အင်ဒရူးဘရိတ်ဘတ် က အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံ မစ္စတာဝိုင်နာပို့ခဲ့သော ဓာတ်ပုံများကို လူ အများသိစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မစ္စတာ ၀ိုင်နာက ယခုကဲ့သို့ ၀န်ခံဖြောင့်ချက်ပေး လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မစ္စတာဘရိတ်ဘတ် က သူ၏၀က်ဘ်ဆိုက်မှနေ၍ မစ္စတာဝိုင်နာ ၏ဓာတ်ပုံများကို တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ လှစ်ဟပြ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မစ္စတာ ဘရိတ်ဘတ်၏ ဖွင့်ချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မစ္စတာဝိုင်နာနှင့် သူ၏ရုံးအဖွဲ့ဝင်များမှာ ငြင်းဆိုမှုမပြုနိုင် သည်အထိဖြစ်သည်။ မစ္စတာဝိုင်နာ၏ ဓာတ်ပုံကို အွန်လိုင်းမှနေ၍ ပေးပို့ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးမှာ အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ်ရှိ မစ္စမီဂန်ဘ ရောက်ဆတ်ဆိုသူဖြစ်သည်။ မစ္စ ဘရောက်ဆတ်ကမူ သူမအနေဖြင့် မစ္စတာ ၀ိုင်နာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှာစကားများ အပြန် အလှန်လဲလှယ်မှုပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သော်လည်း သူမအနေဖြင့် ဓာတ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိခဲ့ကြောင်းကိုမူ ဖော် ပြခဲ့သည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:01 AM
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အော်တိုတယ်လီဖုန်း (ကြိုးဖုန်း)အလုံးရေ သုံးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော်ကိုOne Stop Service နေ့ချင်းပြီးလျှောက်ထားနိုင်သည့်စနစ်ဖြင့် စတင် ချထားပေးပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိရ သည်။
အဆိုပါအော်တိုတယ်လီဖုန်းများကို မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ဖုန်းအလုံးအရေအတွက် ကျန်ရှိသလောက် ကို ဈေးနှုန်းခြောက်သိန်းခွဲ၊ Deposit ကျပ်ငါးသောင်းနှုန်းဖြင့် ချထားပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအိတ်ချိန်းအပိုင်ရုံးများတွင်One Stop Service အနေဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ လမ်း ၄၀ အင်ဂျင် နီယာချုပ်ရုံးတွင်လည်း ပုံမှန်လျှောက် ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီလိုအော်တိုဖုန်း(ကြိုးဖုန်း)တွေ ချထားပေးဖြစ်တာက အများပြည်သူတွေ ဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့အတွက်နဲ့ ဖုန်းDensity မြင့်မားစေရေးအတွက် ရည် ရွယ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖုန်းကို အရင်လို ဈေးကြီးပေးဝယ်ကိုင်စရာ မလိုတော့ဘဲ သက်သက်သာသာနဲ့ လူတန်းစားမရွေး ကိုင် နိုင်တော့မှာပါ။ အဓိကလိုင်းလက်ကျန် တွေကို ရှိသလောက်ချထားပေးသွားမှာပါ'' ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 4:20 AM
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကြီးက လက်ရှိ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) ကို နောက်ထပ် ၅ နှစ် ဆက်ခန့်ထားဖို့ မဲပေး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၂ နိုင်ငံပါတဲ့ ဒီညီလာခံကြီးက ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာစမယ့် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ဒုတိယသက်တမ်း အတွက် မနေ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဖြစ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ်။
အသက် ၆၇ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ အခုလို ထောက်ခံမှုတွေ ရတဲ့အတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခုရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဒုတိယသက်တမ်းကတော့ ၂၀၁၆ မှာ အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သက်တမ်းအတွင်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု၊ လက်နက်လျှော့ချရေး၊ ကျား မ ညီမျှမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေကို သူ့ရဲ့ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ် ၊ ဒီကာလအတွင်း ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အနေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေ တဲ့ နိုင်ငံတွေကို အကူအညီပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်း အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သူ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ပြောဆိုကြပါတယ် ။
တရုတ်နိုင်ငံသည် စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာမှုနှင့် အတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာသည်နှင့် အမျှ တရုတ်နိုင်ငံ စစ်အင်အား တိုးချဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် စိုးရိမ်မကင်း ရှိနေသည်။ ပင်လယ်ပြင် စိုးမိုးရေး ပင်လယ်ပြာ တပ်မတော် တစ်ရပ် ထူထောင်ရေး သည်လည်း အမေရိကန်တို့ ခေါင်းမီး တောက်အောင် ဗျာများ စေခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ် အရေးအခင်းတွင် ထိုင်ဝမ်နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီး အကြား အမေရိကန် ရေတပ် သင်္ဘောများ ရောက်ရှိခဲ့ကြဖူး သော်လည်း မြောက်ပစိဖိတ် ပင်လယ်ပြင်တွင် တရုတ်ရေတပ် သင်္ဘောများ လှည့်လည်သွားလာ နေမည့် အဖြစ်ကိုတော့ အမေရိကန်တို့ လုံးဝ လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
အိုဘားမား အစိုးရ၏ အဖွဲ့ဝင်များ တရုတ်ပြည် ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ တစ်ရပ် သေချာစွာ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲမပြီးသေးမှီ တရုတ်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန် အဟုန်ကြောင့် အမေရိကန်ကို အံ့သြ မှင်တက် မိစေခဲ့သည်။ ငွေကြေး ပြဿနာ များတွင်လည်း တရုတ်သနားမှ အမေရိကန် သက်သာရမည့် အခြေအနေသို့ ရောက်နေသောကြောင့် အမေရိကန် အနေနှင့် တရုတ် ငွေကြေး ပေါ်လစီကို သံကုန်ဆန်ပြာ အပစ်တင် နေကြပြန်သည် ။
အမေရိကန် အနေဖြင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲ အပြီးတွင် စစ်အင်အား ဟိုက်ပါပါဝါ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အာဖဂန်နှင့် အီရတ် စစ်ပွဲတွေဟာ စမ်းသပ်ဆဲ စစ်လက်နက်များ စစ်မြေပြင်မှာ မှတ်ကျောက် တင်နိုင်တဲ့ လက်နက်သစ်များ ဖြစ်လာခဲ့ သော်လည်း အင်အားကြီးမားလှသည့် အမေရိကန် ရေတပ် လေယဉ်တင် သင်္ဘော များကို ဟန့်တားရန် အတွက် ချဉ်းကပ်လမ်း ဖျက်ဆီးခြင်း ဟူသည့် ဒေါင်ဖန်း ၂၁ ဒုံးကျည် များကို တရုတ်နိုင်ငံမှ မဟာဗျူဟာမြောက် ထုတ်လုပ်ပြသ ခဲ့သည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:26 PM
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးစိုးနိုင်ခေါင်းဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်သို့ ရောက်ရှိ
Li Jinhua (1st R), vice chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), meets withadelegation of Myanmar's Union Solidarity and Development Party led by U Soe Naing (1st L) in Beijing, capital of China, June 20, 2011.
Li Jinhua (3rd R), vice chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), meets withadelegation of Myanmar's Union Solidarity and Development Party led by U Soe Naing (4th R) in Beijing, capital of China, June 20, 2011.
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:20 PM
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးများ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင် မကြာမီ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပြောကြားချက် အရ သိရှိရပါသည်။
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးများကို ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့နှင့် ၃၀ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းကို တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာလက်ခံရရှိခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ က ပြောကြားပါသည်။
လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အထူး အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများနှင့် မူ မသိရှိရသေးကြောင်းနှင့် ဖိတ်စာ တွင်လည်း မပါရှိကြောင်း ဖိတ်စာ လက်ခံရရှိသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပြောကြားချက် ကိုကိုးကား၍ ပြည်တွင်းထုတ် Eleven Media ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ဖေါ်ပြထားပါသည် ။
မည်သို့ပင် ဘတ်ဂျက်ပြဿနာ ရှိရှိ၊ လိုငွေ ဘယ်လောက်ပြပြ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် စစ်ရေး အသုံးစရိတ်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၇၀၀ ဘီလီယံ ခန့် သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ တရုတ်၊ ရုရှား အပါအ၀င် အခြား စစ်ရေး အကြီးမားဆုံး တည်ဆောက်နေသည့် နိုင်ငံ ၁၇ နိုင်ငံ စုစုပေါင်း သုံးစွဲမှုထက် ပင်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည် ။
အထက်ပါ ပုံတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အမေရိကန် စစ်ရေး အသုံးစရိတ် ဒေါ်လာ ၇၀၀ ဘီလီယံနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ သုံးစွဲမှု ဒေါ်လာ ဘီလီယံများကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါသည်။ ထိုနိုင်ငံများရဲ့ ကာကွယ်ရေး အတွက် ဂျီဒီပီ သုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်းများကိုလည်း ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:18 PM
လစ်ဗျားတွင် နေတိုးစစ်အုပ်စု၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့အရပ်သားများသေဆုံးကြပြန်
လစ်ဗျားနိုင်ငံ ထရီပိုလီ (Tripoli) မြို့တော်က လူနေရပ်ကွက် တခုကို နေတိုး ခေါ် မြောက်အတ္တလန္တိတ် စစ်အုပ်စုက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဗုံးကျဲခဲ့လို့ ကလေးတွေ အပါအဝင် အရပ်သား အနည်းဆုံး ၇ ဦး သေဆုံးသွားပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ လစ်ဗျား အရာရှိတွေက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နေတိုးဟာ အရပ်သားတွေရဲ့ နေအိမ်တွေကို တမင်ရည်ရွယ် ပစ်ချခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ လစ်ဗျား ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခါလက်ဒ် ခါအင်မ် (Khaled Kaim) က ပြောကြားလိုက်ပြီး ဒီတိုက်ခိုက်မှုက အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ရက်စက်မှုကို ပြသနေတယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နေတိုးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ အတည်ပြုချက်မပေးဘဲ စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ် လို့သာတုန့်ပြန်ပါတယ် ။ နေတိုးဟာ လစ်ဗျားမှာဒီနေ့ထိ အရပ်သားသေကြေမှုတွေ မရှိပါဘူးလို့ တစိုက်မတ်မတ် ငြင်းဆိုလာတာလဲဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:54 AM
အမေရိကန် အစိုးရက ၂ဝ၁၁ ပထမသုံးလပတ် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထွက်ကုန်-Gross Domestic Product GDP အစီရင်ခံစာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁ဝ နောက်ဆုံး သုံးလပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရင် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတိုင်း လိုလိုမှာ ကျဆင်းသွားတာ တွေ့ရတယ်။
၂ဝ၁၁ ပထမသုံးလပတ် ဂျီဒီပီ ကိန်းဂဏန်းတွေက မျှော်လင့်ထားတာထက်တောင် နှေးကွေးအားပျော့သွားတယ်။ စားသုံးသူများရဲ့ သုံးစွဲမှု ကျဆင်းသွားတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ သုံးစွဲမှုကလဲ ပြုတ်ကျသွားတယ်။ အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍကလဲ နိမ့်ကျသွားတယ်။ နိုင်ငံခြား တင်ပို့မှုကလဲ တလိမ့်ခေါက် ကွေးကျသွားတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ တက်လာတာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ဒါက ငွေဖောင်းပွမှု။
ဒီတော့ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်များ အတွင်း စီးပွားရေး ကျဆင်းတဲ့ ကာလမှာ စီးပွားရေး ပြန်လည်နိုးထ ရှင်သန်ရေးအတွက် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် Federal Reserve က အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်ထရီလီယံလောက် သုံးစွဲခဲ့တာ သိပ်ပြီး ထိထိ ရောက်ရောက်မရှိဘူးလို့ ပြောရမလို ဖြစ်သွားတယ်။ အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ Ben Bernanke က စီးပွားရေး နှေးကွေးနေပေမယ့် နောက်ထပ် နိုးထရှင်သန်ရေး အစီအမံတွေ -Stimulus Package လုပ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်။
အခုလို စီးပွားရေးအတွက် အလားအလာ မှေးမှိန်နေချိန်မှာ အိုဘားမား အစိုးရက ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဘတ်ဂျက်လျာထားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ လိုငွေ Deficits အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၁ ထရီလီယံ ပြထားတယ်။ ဒီကိစ္စ အတွက်လဲ ပြဿနာ ရှိနေတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရက လိုငွေကို ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ငွေချေးစာချုပ်တွေ ထုတ်ရောင်းပြီး ငွေချေးရတယ်။ တရုတ်ပြည်ဆိုရင် အမေရိကန်ချေး ငွေစာချုပ်တွေ ဝယ်ယူထားတာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၃ ထရီလီ ယံဖိုးလောက် ရှိတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကလဲ အမေရိကန် ငွေချေးစာချုပ် ဝယ်ယူထားတာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၈၆ ဘီလီယံဖိုး ရှိတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:04 AM
တောင်ကိုရီးယားတို့ မြေပြင်မှ မြေပြင်ပစ်ဒုံးများ နေရာချ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နီးတဲ့နယ်စပ်ဒေသအချို့ကို အမေရိကန်လုပ် မြေပြင် မှ မြေပြင်ပစ် ဒုံးပျံတွေ ရွေ့ပြောင်းနေရာချထားနေတယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားက လာတဲ့ သတင်းတွေ မှာဖေါ်ပြထားပါတယ် ။
ဒါကတော့ The high-mobility artillery rocket system (HIMARS) လို့ခေါ်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဒုံးပစ်စင် တွေနဲ့ ATACMS missiles တွေကိုပစ်နေပုံပါ
တောင်ကိုရီးယားတပ်တွေဟာ အမေရိကန်လုပ် The deployment of the Army Tactical Missile System (ATACMS) ဒုံးပျံတွေကို မြောက်ကိုရီးယားမြို့တော်ပြုံယမ်းကို ပစ်လို့ လက်လှမ်းမှီမယ့်နေရာတွေ ကို ရွှေ့ပြောင်းနေတာဖြစ်ကြောင်း ဒီလိုအမျိုးအစား ဒုံးပျံ အစင်းရေ ၂၂၀ ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က ရောင်းချပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီဒုံးပျံတွေဟာ ၁၆၅ ကီလိုမီတာ အကွာဝေးလောက်ထိ ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါသတင်းမှာဖေါ်ပြထားပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 4:27 AM
မြှုပ်နှံထားသောနေရာကို High Tech Geology (NASA ထုတ်ထားသော ဂြိုဟ်တု Lan-dsat-7 ETM+(2000) Digital Image Data ရှိ Spectrum လိုင်းများကို အထူးပြုလေ့လာခြင်း ဖြင့် ၎င်းရတနာ သိုက်များမြှုပ်နှံထားသည့် နေရာရှစ်နေရာတွေ့ရှိရသည်ဟု Global9Education မှသိရ သည်။ ထို့ပြင် ယင်း နေရာများကို ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီးမှ မြှုပ်နှံ သည့်နေရာကို အတည် ပြုထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီရှေးဟောင်းဘုရားတွေမြှုပ် နှံထားတဲ့နေရာကို တရားဝင်တူးဖော်ချင်ရင် နိုင်ငံတော်ကနေ တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်း ခံရမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီနေရာတွေကိုကွင်းဆင်း အသေးစိတ်တိုင်းထွာပြီးမှ စနစ်တကျတူးဖော်သင့်ပါတယ်။ ရှေးဘုရင် တွေမြှုပ်နှံထားတဲ့ ရတနာသိုက်တကယ်ရှိပြီ ဆိုတာကိုတော့ အတည်ပြုလို့ရပါပြီ''ဟု ဒဂုံ တက္ကသိုလ်ဘူမိဗေဒဌာနမှအငြိမ်းစား ပါ မောက္ခ ဦးစိုးသိန်းက ပြောသည်။ ယင်းရတနာသိုက်နေရာအား လွန်ခဲ့သည့်ငါးလလောက် က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘဲငါးရာတောင်သည် ရခိုင် ပြည်နယ်ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့၏မြောက်ဘက် ၁၆ မိုင်အကွာကုလားတန်မြစ် အနောက် ဘက်ကမ်း ယိုးတရုတ်စံပြကျေးရွာကြီးအနီး စစ်တွေ-ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီး၏ အနောက်ဘက်တစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ တောင်ထိပ်၏ အမြင့်မှာ ပေ ၁၃၆၀ခန့်မြင့်မားပြီး အရှည် ၅၆၃ ပေ နှင့် အကျယ် ၄၆ပေရှိကာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ၏ဗဟိုချက်မတွင် တည် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:32 AM
ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပေးပို့လာတဲ့ သတင်းအရ တင်ပေးတဲ့ မြောက်ဦးက ရွှေဘုရားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်တုန်းက ဒီသတင်းကို လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ရေးခဲ့ကြတဲ့ မီဒီယာတွေက သတင်းမှားတယ် ဆိုတာကို မသိချင်ယောင် ဆောင်နေသလို ၀င်ဆွေးနွေးတဲ့သူ အချို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ သတင်းကို မယုံတဲ့ သဘော ပြောတာ တွေလည်း တွေ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မူလသတင်း ပေးပို့သူကို အသေးစိတ် အချက်များ တောင်းခံပြီး ထပ်ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသ သျှစ်သောင်း ဘုရားနားက လောကမဉ္စူ ဘုရားကို မန္တလေးမြို့က ဒေါက်တာ သိန်းထွန်းရဲ့ မတည်မှုနဲ့ ရတနာမာန်အောင် ဆရာတော်က ကမကထ လုပ်ပြီး ရှေးဟောင်း သုတေသန၊ အမျိုးသား ပြတိုက်နဲ့ စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ပြန်ပြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ငါးနာရီ လောက်မှာ ဘုရား အောက်ခြေပိုင်းက အုပ်ခဲများကို ဖယ်ရှားရာ ကနေ ဌာပနာတိုက်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဇွန် ၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ ရှေးဟောင်းက အရာရှိများရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ဆက်တူးတဲ့အခါ ဘုရား ၃၂ ဆူ၊ ကြေးဌာပနာ ဘုရားငယ် ၁၅၈ ဆူ၊ ဓာတ်တော်ကြုတ် နှစ်ခု၊ ဓာတ်တော်လို့ယူဆရတဲ့ အရိုးများ နို့ဆီဘူး တစ်ဘူး မရှိတရှိကို တွေ့ရပါတယ်။
ရရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မြောက်ဦးမှာ ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပြတိုက်မှာ ထားပါတယ်။ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ မှာတော့ ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင် (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ)နဲ့ အဖွဲ့ ရောက်လာပြီး တူးဖော်တဲ့ နေရာကို စစ်ဆေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြတိုက်ကို သွားပြီး တူးဖော် တွေ့ရှိတဲ့ ဘုရားများကို ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အခု ရွှေဘုရားလို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ဆင်းတုတော်ကို ပန်းတိမ်ဆရာနဲ့ စစ်ဖို့ လမ်းညွှန်တဲ့ အတွက် ဘုရားဂေါပက တွေက ဇော်မင်းထွန်း ရတနာဆိုင်က ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်၊ ပန်းတိမ်ဆရာလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးဇော်မင်းထွန်းကို ခေါ်စစ်ခိုင်း ပါတယ်။ ညနေ နှစ်နာရီမှာ စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါ ဦးဇော်မင်းထွန်းက ၁၅ ပဲရည် ရှိတဲ့ ရွှေဘုရား ဖြစ်တယ်၊ အချိန် လေးပိဿာ ခြောက်ဆယ့် လေးကျပ်သား ရှိတယ်လို့ သတင်းပို့ပါတယ်။
အီကိုလိုင် ရောဂါပိုးကြောင့် EU မှဟင်းသီးဟင်းရွက် တင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်ထားခြင်းအား ရုရှားပြန်လည်ရုပ်သိမ်း
European Commission President Jose Manuel Barroso (R), Russian President Dmitry Medvedev (C) and EU President Herman Van Rompuy (L) attendapress conference after the end of Russia-European Union (EU) talks in Nizhny Novgorod, Russia, on June 10, 2011.
လူတွေကို သေစေခဲ့တဲ့ အီးကိုလိုင် (E.Coli) ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကြောင့် EU ဥရောပသမဂ္ဂက ဟင်းသီးဟင်းရွက် တင်ပို့မှုကို ယာယီအားဖြင့် တားမြစ်ခဲ့တာကို ရုရှားနိုင်ငံက ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ် ။
ရုရှားသမ္မတ ဒီမီထရီ မက်ဗီဒက်ဗ် (Dmitry Medvedev) နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ ကော်မရှင် အကြီးအကဲတို့ဟာ ရုရှားအလယ်ပိုင်း မြို့ကြီး နစ်ဇ်နီ နော့ဗ်ဂိုရော့ဒ် (Nizhny Novgorod) မှာ ၂ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့အပြီး ရုရှားနဲ့ ဥရောပတို့က ပူးတွဲ ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး အခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်တစ်ပျက်ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးရှင်သံလျက်၏ " ဒီလို ရှိတယ်အိုဘယ့်ဆေးဆရာ" ဆောင်းပါးအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း (မန္တလေး) မှပြင်းထန်စွာရှုံ့ချကန့်ကွက်
၂၀၁၁ခု၊ ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ် (၃၉) စာမျက်နှာ (၁၃) တွင်ဖော်ပြပါရှိသော ဆောင်းပါးရှင် သံလျက် ၏ “ဒီလိုဒီလိုရှိတယ် အိုဘယ့်ဆေးဆရာ” ဆောင်းပါး အား ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ရှုံ့ချသည့် ကြေညာချက်တစ်စောင်အား မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (မန္တလေး) မှ ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
အဆိုပါကြေငြာချက်အား ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆)ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပသော အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အသင်း၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသစ်လွင်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကြေညာချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
၁။အဖိုးတန်သောလူ့အသက်များစွာကို ကယ်တင်ရသည့် ဆေးပညာရှင်ဆရာဝန်များ အဖိုို့ ဆေးပညာရှင် ဆရာဝန်တစ်ဦးအဖြစ် လူနာအများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်မှာ ဆေးပညာ အတတ်ကို အောင်မြင်ပေါက်မြောက်စွာ တတ်ကျွမ်းပြီးဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင် ငံဆေးကောင်စီတို့က အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်ပေရာ ဆေးပညာရှင်များသည် ကောင်းမွန်စွာ လေ့လာ ဆည်းပူးထားသောအတတ်ပညာရှင်များ(Professionals)ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (မန္တလေး) သည် ဆေးပညာရပ်များ ကို အောင်မြင်ပေါက်မြောက်စွာ တတ်ကျွမ်းပြီးဟု အသိ အမှတ်ပြုထားခြင်း ခံရပြီးသောဖြစ်သော အဖွဲ့ဝင်ဆရာဝန် များ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအသင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ ၂၀၁၁ခု၊ ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ် (၃၉) စာမျက်နှာ (၁၃) တွင်ဖော်ပြပါရှိသော ဆောင်းပါးရှင် သံလျက် ၏ “ဒီလိုဒီလိုရှိတယ် အိုဘယ့်ဆေးဆရာ” ဆောင်းပါးသည် အယူအဆမှား၊ အချက်အလက်မှား၊ အတွေးအခေါ်မှားတို့ဖြင့် ဆရာဝန်နှင့်လူနာအကြား၊ ဆေးပညာရှင်များနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား အခိုင်အမာတည်ဆောက် ထားရှိပြီးဖြစ်သည့် ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(မန္တလေး)က ယူဆပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:32 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က မြောက်ဦးမြို့ လောကမဉ္စူ ဘုရား ပြုပြင်ရေး လုပ်နေစဉ် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ ဘုရား ဆင်းတုတော်များထဲက အလေးချိန် လေးပိဿာကျော် ရှိတဲ့ ဘုရား ဆင်းတုတော်ကို ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များနဲ့ စစ်ဆေး လိုက်တဲ့အခါမှာ မူလ သတင်းတွေထဲမှာ ပါသလို ရွှေဘုရား မဟုတ်ဘဲ ကြေးဆင်းတုတော်ကို ရွှေရည်စိမ် ထားတာသာ ဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။
ဒီဆင်းတုတော်ကို တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ရှေးဟောင်း သုတေသနဌာနက သူတို့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အတိုင်း အမျိုးအစား ခွဲခြားဖို့ အတွက် နေပြည်တော်ကို သယ်ဆောင်ဖို့ စီမံနေတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီအမတ် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်က ဒေသခံ ပန်းတိမ်ဆရာနဲ့ စစ်ဆေးပြီး ရွှေဘုရား ဖြစ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အတွက် သံဃာများ၊ ဒေသခံများက နေပြည်တော်ကို ယူဆောင် စစ်ဆေးတာကို လက်မခံဘဲ ရတနာမာန်အောင် ဘုရားဂေါပကရုံးမှာ သိမ်းပြီး ကိုးကွယ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ နေပြည်တော်က ရောက်လာတဲ့ ပညာရှင်များနဲ့ ဒေသခံ ပန်းတိမ်ဆရာငါးဦး ပူးပေါင်း စစ်ဆေးတဲ့ အခါကျတော့ ရွှေဆင်းတု မဟုတ်ဘဲ ဝေသာလီခေတ် နောက်ပိုင်း လေးမြို့ခေတ်ဦး ဈာနမုဒြာဟန် ကြေးဆင်းတု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:45 AM
အမေရိကန်ရှိ ထူးချွန်ဟက်ကာ ၄ ဦးတွင် တစ်ဦး FBI အတွက်အလုပ်လုပ်နေသူများဖြစ်
Cumbajohnny ဟုလူသိများသည့် အမေရိကန်အစိုးရဟက်ကာတစ်ဦး
ကွန်ပျူတာ ဟတ်ကာများ (hackers) က မိမိရဲ့ ဒေတာအချက်အလက်များ ဖောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေပါသလား။ သို့မဟုတ် ဟတ်ကာ လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်ကောင်း ရလိုပါသလား။The Guardian သတင်းစာကြီးက မကြာခင်က သတင်းထူးတစ်ခု အဖြစ်ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည် ။
အဆိုပါသတင်းတွင် အမေရိကန်တွင် အထူးချွန်ဆုံး ဟတ်ကာများအနက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (လေးဦးတွင် တစ်ဦးနှုန်း) မှာ အမေရိကန် အစိုးရ သတင်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ (FBI) အတွက် အလုပ် လုပ်ပေးနေသူများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ ဟတ်ကာများက သူတို့ ထူးထူးခြားခြား နှိုက်ရရှိတဲ့အချက်အလက် များကို FBI အေးဂျင့်များသို့ တရားမ၀င်နည်းဖြင့် ရောင်းလေ့ရှိသည်။ ဟတ်ကာတွေက ငွေရရှိဖို့၊ သူတို့ ပြစ်ဒဏ် လျော့ဖို့ အတွက် ထိုသို့ FBI နှင့် အလုပ်လုပ်ကြသည် ဟုဆိုပါသည် ။
ဥပမာ အနေဖြင့် ဆိုက်ဘာ အမှောင်လောကမှာ Cumbajohnny ဆိုပြီး လူသိများတဲ့ အဲလ်ဘတ် ဂွန်ဇာလဇ် ဆိုရင် နယူးယော့ခ် ဘဏ်စက်တစ်ခုမှ ငွေများစွာ ခိုးယူမှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ပြီး၊ ယခု FBI အတွက် လျှို့ဝှက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ လူငယ် ဖြစ်သည်။ ဂွန်ဇာလဇ် ကို လစာအဖြစ် FBI မှ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၇၅,၀၀၀ လျှို့ဝှက်ပေးနေရပါသည် ။
ချိန်ခွင်ကြိုးပြတ် လျှာကပ်နေပါတဲ့ US ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း
ကမ္ဘာ့ငပွကြီးက သူနဲ့ ဆက်ဆံခွင့် ရဖို့အရေး၊ Sanction ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ အရေးတို့ အတွက် လူ့အခွင့်အရေး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တစ်စာစာ အော်ရင်း ရှေ့တန်း တင်လာတယ်ဗျ။ ခက်တာက ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ဘာတွေလုပ်မိလို့ ဘာတွေကို ရပ်တန့်ပေးရမှန်း မသိတာပါပဲ။
အဲဒီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကြီးဟာ စပြီး အသံကျယ်လာ ကတည်းက နားမလည် တလည်နဲ့ နိုင်ငံငယ်တွေ အပေါ် လူပေါ် လူဇော်လုပ်ဖို့ ထွင်လိုက်တဲ့ မာရ်နတ်ရဲ့ လက်နက်ကြီး ဆိုတာ သိပြီးသားလို့ ပြောရရင် လွန်မလားပဲ။ ဘာလို့ဆို ကျုပ်တို့လည်း နားထဲ ကျလိကျလိဖြစ်လို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် Data တွေ ကိုင်ရတော့တာကိုး။ အဲဒီမှာတွင် US ရဲ့ စုတ်ပဲ့ချက်တွေကို သူ့အလိုလို တွေ့ရပါရောဗျား။ တကယ့်ကို ဆိုးရွားလှတယ်လို့ ကမ္ဘာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို သူ့အလိုကိုလိုက် သူ့အကြိုက်ကို ဆောင်တဲ့အခါ အဲဒီသူတွေ သူ့နိုင်ငံထဲမှာ ဘာတွေ လုပ်ပလေ့စေ၊ အမျိုးမျိုး ထောက်ခံ၊ ထောက်ပံ ခဲ့တာများ ရွံစရာကြီးပါဗျား။
ဆာနီအဘာချာ (နိုင်ဂျီးရီးယား)၊ အီဒီအာမင် (ယူဂန္ဓာ)၊ ဟူဂိုဘန်ဇာ (ဘိုလီးဗီးယား)၊ ဘာတစ္စတာ (ကျူးဘား)၊ ပစ်ဘိုသာ (တောင်အာဖရိက)၊ ဟန်ဘာတိုဘရန်ကို (ဘရာဇီး)၊ ရာအူးလ်ဆီးဒရက်စ် (ဟေတီ)၊ ဗီနီစီယိုဆီရီဇို (ဂွာတီ မာလာ)၊ ချန်ကေရှိတ် (တိုင်ဝမ်)၊ ရော်ဘာတိုဆူယာဇိုကော်ဒိုဗာ (ဟွန်ဒူရပ်စ်)၊ အယ်လ်ဖရက်ဒိုခရစ်ရှန်နီ (အယ်လ်ဆာဗေဒို)၊ ငိုဒင်ဇင်း (တောင်ဗီယက်နမ်)၊ ဆမ်မြူရယ်ဒိုး (လိုင်ဘေးရီးယား)၊ ဖရန်ကွိုက်စ် ဒူဗာလီယာ (ဟေတီ)၊ ဂျင်းကလော်ဒီဒူဗာလီယာ (ဟေတီ)၊ ဆော်ဒီဘုရင်အဇစ်ဖဒ်ဘင်အဗ္ဗဒူ၊ ဖရန်ကို (စပိန်)၊ ဟစ်တလာ (ဂျာမဏီ)၊ မော်ရိုကိုဘုရင်ဟက်ဆန် -၂၊ မားကို့စ် (ဖိလစ်ပိုင်)၊ မာတီနက်ဇ် (အယ်လ်ဆာဗေဒို)၊ မိုဘူတ (ဇိုင်ယာ)၊ နိုရီယေးဂါး (ပနားမား)၊ တူဂတ်အိုဇယ် (တူရကီ)၊ အီရန်ရှားဘုရင်၊ ဂျော့ခ်ျပါပါဒိုပေါလော့စ် (ဂရိ)၊ ပတ်ချွန်ဟီး (တောင်ကိုရီးယား)၊ ပီနိုချက် (ချီလီ)၊ ပိုပေါ့ (ကမ္ဘောဒီးယား)၊ စီတီဗန်နီရာဗန်ကူ (ဖီဂျီ)၊ အက်ဖရင်ရိုင်ယော့စ်မွန့်တ် (ဂွာတီမာလာ)၊ ဟေလီဆာလက်စီ (အီသီယိုးပီးယား)၊ အန်တိုနီယိုဆာလာဇာ (ပေါ်တူဂီ)၊ အနက်စ်တာစီယိုဆိုမိုဇာ-စီနီယာ (နီကာရာဂွာ)၊ အနက်စ်တာစီယိုဆိုမိုဇာ- ဂျူနီယာ (နီကာရာဂွာ)၊ အီယန်စမစ် (ရိုဒီးရှား)၊ အယ်လ်ဖရက်ဒိုစထရိုစ်နာ (ပါရာဂွေး)၊ ဆူဟာတို (အင်ဒိုနီးရှား)၊ ရာဖေးလ်ထရူဂျီလို (ဒိုမီနီကန်)၊ ဂျော့ခ်ျရာဖေးလ်ဗီဒဲလာ (အာဂျင်တီးနား)၊ ဇီယာအူးလ်ဟတ် (ပါကစ္စတန်) စတဲ့သူတွေဟာ သူတို့အနောက်က လူတွေ ပြုစုထားတဲ့ စာရင်းအရ လူ့အခွင့် အရေးဆိုတာ ချိုနဲ့လား မေးတဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်တယ်ဗျ။ တစ်ချို့ဆို လူတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ကို သတ်ကြတာ။ ဒါတွေကို US က ထောက်ခံ ရပ်တည် ပေးခဲ့တာဆိုပဲ။ အဲဒီထဲက တစ်ချို့ကျတော့ US ရဲ့ ရန်သူတွေပါလို့တော့ မပြောနဲ့။ နဂိုက ဘာတွေ ဆိုးနေဆိုးနေ သူ့မထိခင်က အကောင်း ပြောနေပြီး၊ သူ့စကား နားမထောင် တော့မှ ထကြိတ်တော့တာ (ဥပမာ။ ဟစ်တလာ၊ နိုရီယေးဂါးပေါ့)
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက အများစုဟာ CIA က ကြိုးကိုင်တဲ့ အာဏာ သိမ်းမှုတွေကနေ အာဏာ ရလာတာဆိုပဲ။ ဘာအတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ လုပ်သမျှ US က မျက်စိမှိတ် လည်ပင်း ဖက်နေရသလဲဆို သူတို့ နိုင်ငံတွေထဲက သဘာဝ ရင်းမြစ်တွေကြောင့်၊ ဈေးချိုတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရလိုမှုကြောင့်၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ပူးပေါင်း နှိမ်နင်းဖို့ အတွက်ကြောင့်လို့ ဆိုပါဗျား။ တစ်ချို့ဆို အခုထိ ထိမရ တို့မရ သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိနေကြတယ် ဆိုပဲ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:06 AM
မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ရထား ပေါ်တွင် ဗုံးဖေါက်ခွဲခဲ့သည့် တရားခံ အား သက်ဆိုင်ရာမှ ပြည်သူများ၏ အကူအညီဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ယနေ့ထုတ်ကြေးမုံ သတင်းစာ တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
တရားခံမှာ ကရင်ပြည် နယ်သံတောင်မြို့နယ် လိပ်သိုရာဒို အုပ်စု ဒ၀ါလော်ချီးကျေးရွာမှ အဖ ဦးဖူးတဲ၏သား ကျော်ဒီ (ခ) မာရီနိုဖြစ်ကြောင်း ၄င်းသည် KNU သောင်းကျန်းသူများ ထံတွင် ဖေါက်ခွဲရေးသင်တန်း တက်ရောက်ကာ ၂နှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးသူဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခုအခါ KNU တပ်မဟာ ၂ ရင်း ၅ မှဖေါက်ခွဲရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်အဆင့်ရှိ ရှာလစ်ခွေနှင့် ဆက်သွယ်မိပြီး ၄င်း၏စေခိုင်းချက်အရ ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၄င်း၏ ဖေါက်ခွဲရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံအဆင့်ဆင့်ကို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် အကျယ်တ၀င့်ဖေါ်ပြ ထားပါသည် ။
တရားခံ ကျော်ဒီ (ခ) မာရီနိုသည် ဖေါက်ခွဲမှု ပြုလုပ်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန် ပင်လောင်းလမ်းအတိုင်း ပုန်းရှောင်ထွက်ပြေးစဉ် သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများက ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်း ကူညီမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ရထားဗုံးပေါက်ကွဲစဉ်က အစိုးရ၏ လုံခြုံရေးပေါ့လျှော့လေဟန် ၊ ပြည်သူများမလုံမခြုံနေရလေဟန် ညတွင်းချင်း သတင်းများဝေေ၀ဆာဆာထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ပြည်ပမီဒီယာအသီးသီးဟာ တရားခံ မိချိန် မှာတော့ နှုတ် ဆိတ်နေတာကိုကြည့် ခြင်းအားဖြင့် ဒီအသံလွှင့်ဌာနတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း မရှိတာ ပေါ်လွင်နေတယ်လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုမှုများရှိကြောင်း လည်းသိရပါတယ် ။
စာခြောက်ရုပ်မ တစ်ယောက် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်လာပြီး နည်းနည်းလေး အရှိန်ရလာတာနဲ့ နေမရထိုင်မရ ဖင်တကြွကြွဖြစ်လို့ ခရီးထွက်မယ် လုပ်လာပြန်ပါတယ်။ ထွက်ဆိုလည်း ထွက်စေပေါ့ဗျား။ သို့သော် မထွက်ခင် ကတည်းက လူဝါးဝလို့ အစိုးရမှာ သူ့လုံခြုံရေး တာဝန် ရှိတယ်တဲ့ဗျ။ သူကလည်း နှုတ်ထွက် စကားနဲ့ အရှက်တရား ဗလာ၊ အားမနာ လျှာမကျိုး လေဆိုး ထိုးလာသလို၊ သူ့နောက်ကနေပြီး အကြံကြီး ကြံနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆရာကြီးတွေ၊ သူ့ရဲ့ နောက်မြီးဆွဲ၊ ထဘီထဲက မာန်ဖီနေသူတွေကလည်း ဆွဲဆွဲငင်ငင်နဲ့ အူသံပေးလာကြတယ်။ ကြားခါစက ကျုပ်တို့များ နားကြား မှားသလားလို့ နားဖာကလော်နဲ့ ချေးညှော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားမိတယ်။ တကယ် ပြောတယ် ဆိုတာ သေချာတော့မှသာ၊ မြတ်စွာဘုရား ---- နိုင်ငံအတွက် ခြူးတစ်ပြား မနီး၊ အချည်းနှီး ဖြစ်တဲ့ သူ့ခရီးကိစ္စ၊ အစိုးရမှာ တာဝန် ရှိတယ်လို့ ဘယ့်နှယ် ပြောရဲပါလိမ့် ဆိုပြီးလည်း အူထဲကျလိ ကျလိ ဖြစ်အောင် ရယ်ချင်မိတယ်။ ဒီလောက် တောင်မှ ကိုယ့်လမ်းစဉ်ကိုယ် မယုံကြည်တော့ပါလား ဆိုပြီးတော့လည်း ဂရုဏာ သက်ပြင်းကြီး ချမိတယ်။ ပြည်သူကို သောက ပိုအောင် Sanction ကအစ ဒုက္ခ အဝဝ ကြုံတွေ့ရအောင် ခပ်ပြောင်ပြောင် လုပ်ထားတော့၊ ကြောက်မယ် ဆိုလည်း ကြောက်စရာပေါ့လေ။
တကယ်တော့ သူဟာ အခုချိန်မှာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ တစ်ယောက်ပါပဲ။ နည်းနည်းမှ စဉ်းစားမရတာက ဘာအတွက်နဲ့ သူ့ကိုမှ ကွက်လို့ လုံခြုံရေး လုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆို ရတာလဲ ဆိုတာကုိုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူ့ဘာသာ ခရီးသွားနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီးဟာ နိုင်ငံတော်အနှံ့ ဥဒဟို သွားလာ နေလိုက်ကြတာများ ပျားပန်းခပ်လို့ပါ။ ဘယ်သူကမှ ဘာကိုမှ စိုးရိမ် ကြောင့်ကြစရာ မလိုဘူး။ နေ့နေ့ ညည အေးချမ်း လိုက်ပါဘိ။ နေရာတကာ လူတွင်ကျယ် လုပ်တတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေ နိုင်ငံကြီးလို ၆ မိနစ်တိုင်းမှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် မုဒိမ်းကျင့် ခံနေရတဲ့၊ မိနစ်တိုင်း လူတစ်ယောက် ဓားပြတိုက် ခံနေရတဲ့၊ ၃၄ မိနစ်တိုင်း လူတစ်ယောက် အသတ်ခံ နေရတဲ့၊ ၁၅ စက္ကန့်တိုင်း နေရာတစ်ခု ဖောက်ထွင်း ခံနေရတဲ့၊ ၂၇ စက္ကန့်တိုင်း ကားတစ်စီး အခိုးခံနေရတဲ့၊ ၅ စက္ကန့်တိုင်း တစ်ယောက်ယောက် အခိုးခံနေရတဲ့၊ ၂၂ စက္ကန့်တိုင်း တစ်ယောက်ယောက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံ နေရတဲ့၊ ၃ စက္ကန့်တိုင်း တစ်ယောက်ယောက် လုယက်ခံနေရတဲ့၊ ၃၄ စက္ကန့်တိုင်း တစ်ယောက်ယောက် လက်ရောက်မှု ကျူးလွန်ခံနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတော့ အိမ်မက်တောင် မမက်ဖူးပါဗျား။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:41 PM